Kuhle smartphone 2019 - Izindaba Rule
Kuhle smartphone 2019
iPhone, Huawei, Samsung futhi OnePlus kuqhathaniswa futhi bathi kungcono
Lesi sihloko osesikhundleni “Kuhle smartphone 2019: iPhone, Huawei, Samsung futhi OnePlus kuqhathaniswa futhi bathi kungcono” kwalotshwa Samuel Gibbs, I-theguardian.com ngoMsombuluko 10th June 2019 05.47 UTC
Udinga smartphone entsha kodwa awazi ukuthi iyiphi iyona engcono kunazo zonke? Nayi inkombandlela Ngokuqhathanisa wamanje phezulu ekupheleni Smartphones kusuka Apple, Samsung, Huawei, OnePlus nabanye ukukusiza ukukhetha kwihendisethi engcono kuwe.
akukaze kube khona isikhathi esingcono ukuthenga iwuhlelo smartphone entsha ne eziningi izinga handsets kuyatholakala at ezahlukene ebanzi of amanani kunanini ngaphambili. Kungakhathaliseki igunya lakho ukuphila kwebhetri izinsuku ezimbili, kumnandi ukusebenza ikhamera noma isikrini umbukwane, kukhona izinto ezimnandi ongakhetha kuzo.
Umhlahlandlela Lokhu lomthengi Guardian phezulu ekupheleni Smartphones wagcina olusha ku 10 June 2019, futhi imele amamodeli ezekhethelo ngesikhathi. Njengoba onobuhle ezintsha ezikhishwe futhi ihlolwe, lo mhlahlandlela kuzobuyekezwa ukukusiza ukhethe iwuhlelo ifoni ekufanele.
Siyakwamukela omunye iziqondiso umthengi Guardian esisha sika. Lesi sihloko limelela namakhulu amahora zokuhlola ngumlobi makuqoqwe uhlu lesifinyetiwe imikhiqizo noma amasevisi ukuze ukwazi ukukhetha okungcono futhi uzibe lonke Kunconywa ngaphandle kokuba ukwenza amahora olwakho ucwaningo.
Ngenkathi Guardian kungenzeka uthole ikhomishini encane evela izinto wathenga ngokusebenzisa lobulungu links, izinto efakiwe kumhlahlandlela lokhu lomthengi ziye ihlolwe futhi afakwe ngaphandle nethonya kusuka yimuphi umkhangisi noma isinyathelo commercial.
Kuhle jikelele: OnePlus 7 Pro
RRP: £ 649 / $669
The OnePlus 7 Pro has a okukhulu, isihenqo langa, ifoni esheshayo-uzizwa ngamamayela futhi umncintiswano Ukushaya ekubonisweni zeminwe Enani.
Photograph: Samuel Gibbs / The Guardian
Lezi amadili olusha njalo ziye kumthombo ngokusebenzisa third-party ukuqhathanisa intengo service. The Guardian angenza ikhomishana esincane uma umfundi nokuchofoza kokuya futhi yenza ukuthenga.
I superphone zakamuva liyehlisa mncintiswano kunani ngenkathi enikeza umuzwa ongcono cishe ngazo zonke izindlela okunenjongo. The OnePlus 7 Pro esiqinile okukhulu kuze kube manje nge QHD silo 6.67in + esibukweni AMOLED, okuyinto iyona engcono kunoma iyiphi ifoni. It uyagijima ngesilinganiso Ukuvuselela ka 90Hz - kuqhathaniswa ne 60Hz mncintiswano - okwenza konke kusuka ebonakalayo ngokusebenzisa uhlu ukushayisa ngokusebenzisa imidlalo super bahlakaniphe.
Isikrini ingilazi ye-onqenqemeni kuzo zonke izinhlangothi futhi, entula iyiphi intrusions yi namantombazane ezikhungethe izimbangi njengoba ikhamera selfie iyiswe module esinenjini ozivelelayo aphume lefoni uma kudingeka.
Speed ​​yigama umdlalo. The OnePlus 7 Pro smartphone esheshayo-uzizwa ngamamayela. Ingxenye okungukuthi version le nkampani esihle Android 9 Pie ngokuthi OxygenOS, okuyinto ku-par ye-Google kwi-Pixel, kanti omunye ihadiwe top-of-the-line.
It has Snapdragon Qualcomm yakamuva 855 amagama, okungenani 6GB we-RAM 128GB wesitoreji. Kodwa ukuthi isitoreji futhi ngokushesha okuningi kunalokho izimbangi usebenzisa entsha UFS3.0 ejwayelekile, futhi umehluko kwansuku usuku ukusetshenziswa palpable.
Ngisho optical ekubonisweni zeminwe Enani iyona engcono kunazo zonke ibhizinisi, eshaya ukuthi le-Huawei P30 Pro ne afanayo bendabuko capacitive izinzwa isivinini.
I kathathu uhlelo ikhamera ngemuva olufana izimbangi kuhlanganiswa main 48MP, a 16MP engela ultra-ububanzi futhi i 8MP Telephoto ikhamera. Ngeke ishaye Pro P30, kodwa elifana noma ishaya lonke ku imininingwane kanye Umbuso.
Impilo yebhethri muhle, kodwa hhayi Huawei Ukushaya. Ishaja ngempela okusheshayo usebenzisa WarpCharge uhlelo OnePlus sika, kodwa akukho ukushaja okungenantambo, okuyinto isono. Kuyinto amanzi ukumelana ngokwezinga elithile, kodwa ayinayo isilinganiso IP. It has ukwesekwa ezimbili-sim ezimakethe kakhulu kakhulu.
The OnePlus 7 Pro futhi iza inguqulo 5G kakhulu, okuyinto eyodwa-sim kuphela kodwa usayizi ofanayo, isisindo kanye nokusebenza njengoba inguqulo 4G kuphela futhi iyatholakala kuphela kusuka EE e-UK ukuqala at £ 170 nge £ 59 / ngenyanga uhlelo ezingu-24.
Kungani kufanele uyithenga?
Isikrini esingenakuqhathaniswa, isivinini bodwa kanye ekubonisweni zeminwe Enani, ngokuhlanganiswa OxygenOS bahlakaniphe, ukwenza imisebenzi ngisho ezivamile injabulo. Luhlelo lolukhulu lwa OnePlus 7 Pro kakhulu nakanjani elula ukusebenzisa, kodwa ukwenza elula kuwufanele
Thenga uma: ufuna okungcono futhi esheshayo superphone isipiliyoni
Musa ukuthenga uma: ungafuni yokwelula efonini kanjeya
isibuyekezo esigcwele: OnePlus 7 Pro ukubuyekeza: isilwane ngokuphelele ngazo zonke izindlela
Kuhle-iOS: Apple iPhone XS
RRP: £ 999 / $999
kulencane iPhone entsha Apple futhi inhlanganisela umhlabeleli kwamandla, usayizi, screen nekhamera.
IPhone engcono akuyona enkulu noma eqolo. IPhone XS ihlanganisa omuhle, ezinhle-usayizi wesibuko 5.8in, umzimba svelte futhi top-notch ukusebenza ku iphakethe ezithandeka kakhulu kusukela Apple kuze kube manje.
ID Face Apple iyona engcono ubuso uhlelo ukuqashelwa ebhizinisini, uhlelo ezimbili-ikhamera ngemuva kuyinto enhle kakhulu, njengoba ukusebenza kohlelo A12 processor Bionic futhi isigaba-ehola isenzo navigation system iOS, esiye sathatha indawo inkinobho ekhaya ka-iPhone yore.
Uneminyaka futhi ethubeni engaba mihlanu izibuyekezo zesofthiwe, okuyinto cishe okungenani ezimbili ngaphezu kwanoma yimuphi omunye umkhiqizo kwefoni. IPhone XS kuyinto metal namabhodlela isangweji, futhi niyosiphula njengoMfula umncintiswano lapho lehla, kodwa engagqwali izinhlangothi steel namabhodlela emuva zikhipha okunethezeka bazizwe hhayi ifaniswe nezinye izingcingo. Ngeshwa abaningi uyokufaka ecaleni.
I downsides enkulu ziyintengo, ngaleso £ 1,000 kungenzeka kakhulu ngaphezu mncintiswano, futhi ukuphila kwebhetri, okusho ezilawula kuphela cishe usuku wokusetshenziswa naphakathi. IPhone XS has okungenazintambo futhi isekela ukushaja okusheshayo nge-USB-C ukuze Lightning ikhebula, kodwa imikhumbi kuphela ishaja kancane ebhokisini. imodemu ukusebenza yeselula layo nalo yini kwafana izimbangi, olwisana ngaphezulu ukugcina ukusebenza 4G uxhumano lwedatha ezindaweni eminyene, ikakhulukazi uma kuqhathaniswa ne Mate 20 Pro.
Uma ikhiyiwe e-iOS, noma ufuna isikhathi eside isofthiwe update Ukusabalala, ke iPhone XS iyona engcono Apple smartphone ungathenga (hhayi kude kakhulu ngemuva Mate 20 Pro jikelele), sibonga inhlanganisela yayo usayizi, ikhamera, ikhono nokuzwakala zikanokusho.
Thenga uma: ufuna i-iPhone engcono
Musa ukuthenga uma: ungafuni ukuchitha £ 999 noma ufuna ukusebenzisa i-Android
isibuyekezo esigcwele: Apple iPhone XS ukubuyekeza: izinyathelo ezimbili phambili, isinyathelo esisodwa emuva
Kuhle-Android ezincane: Samsung Galaxy S10
RRP: £ 799 / $899
A big, isihenqo amahle e iselula ezincane, Galaxy S10 kuyinto indawo elimnandi e iwuhlelo smartphone umugqa Samsung sika.
Uma ufuna enuka indawo phakathi enkulu, isihenqo emangalisa kanye nosayizi ifoni ezincane ukuthi kulula ukubhekana futhi kufanelekile ekhukhwini, lokho Galaxy S10.
I QHD 6.1in + esibukweni AMOLED nge encane imbobo-Punch notch phezulu kwesokudla ingenye engcono kakhulu emakethe futhi sikhulu ngokwanele ukwenza iningi zokusebenza nama-movie abukeka emahle.
bezels Small wonke kuhle kwenze ifoni ukuthi kuhle compact kuqhathaniswa izimbangi, futhi kakhulu kungcono ukukhanya. Kuba namanje ingilazi nensimbi isangweji, okusho kungase kudingeke icala ukuvikela ekuweni.
I ultrasonic zeminwe inzwa ukukhwezwa ngaphansi isibonisi isebenza kahle, nakuba ayisekho esheshayo emakethe.
isofthiwe entsha Samsung sika Omunye-UI, okusekelwe Android 9 Pie, kuyinto eqa enkulu ekwenzeni ifoni elikhulu kulula ukusebenzisa, ngokubeka izinto kufanele uthinte ezansi kwesikrini nolwazi ebe phezulu. Samsung futhi kukunika ukukhetha bendabuko okhiye bokuzulazula noma uswayiphele ukuthinta.
Kufanele ubone emhlabeni-kweminyaka emithathu ukwesekwa isofthiwe evela Samsung, nakuba inkampani ngokuvamile kancane ukuletha elikhulu Android version izibuyekezo.
Ezingemuva ikhamera kathathu ingenye engcono ukuvumela ukusondeza kusukela 0.5 ngokusebenzisa 2x, futhi a zoom 10x hybrid. Ngeke beat le-Huawei P30 Pro, kodwa ihambisana ukuphumula. Ikhamera selfie pokes ngqo Nokho kwesikrini futhi ingenye best emakethe.
Ukusebenza kuhle, kodwa ukuphila kwebhetri ingenye buthaka lo S10 sika. Kuyoba usuku olulodwa wokusetshenziswa kodwa hhayi okuningi. Kukhona zombili ikhebuli okungenazintambo okusheshayo phezulu up emini futhi wireless amandla share sici uphendulela ifoni ibe ishaja ad-hoc okungenantambo namanye amadivayisi.
The big, isihenqo amahle e iselula esincane uma iqhathaniswa nezinye main ukudayisa iphuzu, kodwa ikhamera ezinhle, ukusebenza kanye ukubukeka ukusiza kakhulu
Thenga uma: ufuna ukulinganisela okuhle kwe-isikrini sakho esikhulu ne phone encane
Musa ukuthenga uma: ufuna ukuphila kwebhetri brilliant
isibuyekezo esigcwele: Samsung Galaxy S10 ukubuyekeza: indawo elimnandi
Kuhle ikhamera: Huawei P30 Pro
RRP: £ 899
I-Huawei P30 Pro has a esikhulu, isihenqo amahle, impilo yebhethri ende nekhamera umdlalo lokushintsha nge ezehlukile ukusebenza ephansi ukukhanya, 5x zoom optical futhi kuze kube 50x zoom yedijithali.
Ikhamera kahle ucingo Huawei P30 Pro abanye wekhasi. Ayikho enye ifoni inikeza njengoba esibanzi inhlanganisela njengoba Huawei esisha Leica isikwele ikhamera.
I 20MP 0.6x ultra-wide kokuma kwekhamera kuyajabulisa, main 1x 40MP ikhamera kakhulu futhi sazihlanganisa entsha periscopic 5x zoom optical ikhamera ukuthi uthola eduze kunanoma iyiphi enye smartphone. Uma kahlanu kokukhulisa kwakunganele, kukhona indawo enhle kakhulu 10x hybrid zoom phezu bese kuthi i-zoom yedijithali yonke indlela kuze kube 50x. A 3D ukujula-abathola isikhathi ka-indiza inzwa uphetha amamojuli ngemuva.
amazinga Emangazayo zoom eceleni, Pro P30 Ubuye umdlalo lokushintsha ephansi ukukhanya ukusebenza ukuthi kweso uphendulela ebusuku ku usuku ngaphandle kokuba ulinde ambalwa lungabanjwa.
Zonke ezinye ifoni esihle kakhulu nge Izinketho zemibala emangalisa. Esikhulu 6.47in FHD + OLED ingenye engcono, nge notch elincane phezulu equkethe ikhamera selfie kanye bezels ukwenzela ukungena okuncane kakhulu wonke-round. Emaphethelweni lwalugobile ukugcina ububanzi ifoni 73.4mm ewumngcingo ububanzi, okusho kusenzima kuqhathaniswa ukulawuleka futhi kulula ukuba asebenzise kwansuku usuku ikakhulukazi kuqhathaniswa OnePlus 7 Pro noma i-iPhone XS Max.
I e-screen zeminwe optical inzwa kuyinto yesibili kuphela OnePlus 7 Pro sika. Huawei sika top-notch Kirin 980 amagama, 8GB we-RAM kanye no-128GB wesitoreji, inikeza ukusebenza okukhulu kanye ngebhethri uzoba eside emhlabeni izinsuku ezimbili. Plus uyala esheshayo futhi has okungenazintambo namandla ukwabelana.
Huawei sika-Android Ushintshe 9 Pie, EMUI 9.1, customizable kakhulu futhi unemisebenzi eminingi izici kodwa kungase kungabi okuthandwa wonke umuntu. Huawei okwamanje ebhekene unswinyo kusuka eU.S. njengengxenye US-China ukuhweba impi, okuyinto kwenza ikusasa layo engaqinisekile. I P30 Pro Kufanele uqhubeke ukuthola izibuyekezo njengoba evamile, Nokho.
Ikhamera kuyinto umdlalo-zishintsha okunenjongo, hhayi gimmick ligcwaliswe izindlela, kuyilapho bonke abanye ifoni kakhulu
Thenga uma: ufuna ikhamera kahle ifoni enkulu
Musa ukuthenga uma: ufuna ifoni ezincane noma ukhathazekile US nokuvinjelwa Huawei
isibuyekezo esigcwele: Huawei P30 Pro ukubuyekeza: umdlalo lokushintsha ikhamera, impilo yebhethri lezinkanyezi
Inani Kuhle: OnePlus 6T
RRP: £ 499 / $549
Ngamafuphi nje, at £ 500 une ukuchitha isamba esikhulu ngokwengeziwe ncono OnePlus 6T.
Uma ufuna a okukhulu, top-Spec ifoni, kodwa ungafuni ukuchitha £ 900, ke OnePlus 6T nguye ukuthenga.
It has a 6.41in egcwele isikrini sakho esikhulu ne enhle HD OLED, a abafelokazi amancane isiqongo-like notch wekhamera selfie, bezels ukwenzela ukungena okuncane kakhulu nxazonke kanye nokwakhiwa ezinhle-umuzwa metal namabhodlela afanayo izinga abanye kakhulu.
It has a top-of-the-line processor, 6GB RAM of, 128GB wesitoreji nangemva kwamahora angu-30 wempilo yebhethri kakhulu. Okuhlangenwe nakho-Android ku-OnePlus, Oxygen OS, kuyinto yesibili kuphela ku-Google ku-Pixel; kuba ngesihluku okusheshayo futhi abushelelezi ukusebenza. OnePlus iqinisekisa iminyaka emibili izibuyekezo zesofthiwe futhi omunye unyaka izimvuselelo nokuvikeleka kusukela ngosuku ukukhululwa kwe-ifoni.
Lize ine cutting edge ekubonisweni zeminwe Enani, okuyinto cishe kwafana okungcono ozinikele capacitive izinzwa, nokusekelwa ezimbili-sim sokubahlonipha ezimbili senethiwekhi yeselula yocingo ukuxhumana ngesikhathi esifanayo.
I downsides Uyi ezinhle, kodwa hhayi kakhulu, ikhamera okungahambisani ngempela ukufanisa mncintiswano lapha, kungekho esisemthethweni Isilinganiso ukumelana namanzi futhi akukho ukushaja okungenantambo.
Isikrini okukhulu futhi okukhulu nge bezels ezincane, isofthiwe esihle kanye nokusebenza, ekubonisweni zeminwe Enani nekhamera ezinhle-kodwa-hhayi-omkhulu kusho ukuthi kufanele uchithe kakhulu ngaphezulu ukuze uthole ifoni kangcono kunalokhu.
Thenga uma: ufuna ifoni top-notch kodwa ungafuni ukusebenzisa imali engaphezu kwaleyo £ 500
Musa ukuthenga uma: ufuna ikhamera ezinhle ngempela
isibuyekezo esigcwele: OnePlus 6T ukubuyekeza: uzowathola kudingeka bachithe double ukuze uthole okungcono kunalokhu
Smartphone ezilinganiselwe ngu usayizi wesibuko ilinganiswa diagonal ngamasentimitha. Ezinkudlwana inombolo elikhulu ifoni, kodwa amafoni ezahlukene zisebenzisa okungu ezahlukene ukuphakama ububanzi.
Yeka indlela okulula ngayo ukuba asingathe kuza ububanzi ifoni isisindo sawo. I iyincane njalo kuba, kuba lula kakhulu ukuba ngiyibambe ngesandla esisodwa futhi mancane kangakanani uyibeka.
Lokho okuvame ukubizwa ngokuthi i-processor e iselula empeleni kuyinto uhlelo-on-a-chip ngokuhlanganisa processor, ihluzo nezinye izinhlelo ezibalulekile zibe munye.
Ngokuvamile le entsha ye wokugaya namandla kakhulu nebhethri kahle kuyoba. Samsung, Huawei ne-Apple ukwenza bebodwa, ngenkathi Qualcomm kuyinto umphakeli elikhulu nezinye brand ekupheleni eliphezulu, nge yayo Snapdragon 8-uchungechunge uhla phezulu.
I-RAM (inkumbulo) lapho izinhlelo zakho zokusebenza izinqubo zigcinwa lapho lisetshenziswa, ngakho wena ngaphezulu ifoni yakho ine ngcono, kuze kube iphuzu.
Android idinga RAM ezingaphezu kuka-iOS, kunzima ngqo eziqhathanisa ngakho. Kodwa nge-Android okungenani 4GB we-RAM okwamanje Kunconywa.
Ihlukile inkumbulo, Isitoreji lapho konke egcinwe efonini, kufaka phakathi izinhlelo zokusebenza kanye nabezindaba. Ngenkathi amafoni ambalwa bangathethelelwa isitoreji bandiswe ne-microSD memori khadi, kakhulu abakwazi.
Lokho kusho ukuthi kufanele sihlose 64GB wesitoreji okungenani, kodwa uma ufuna ukugcina eziningi izithombe. Cloud ezinsizakalweni ezifana Spotify noma ifotho ye-Google engasiza okwehlisa umculo wakho, izithombe noma amavidyo ku-inthanethi.
Ukugcina ifoni yakho iphephile kubaduni kubalulekile, okwenza izibuyekezo zesofthiwe ezibucayi patch amaphutha izimbobo zokuphepha, kanye singeza izici ezintsha futhi ekuthuthukiseni izinto ezifana ukuphila kwebhetri futhi ikhamera.
Akuwona wonke amafoni ukuthola izibuyekezo avamile. Apple ukweseka amafoni amadala iyona engcono kunazo zonke ibhizinisi emhlabeni 5 iminyaka, kulandele Samsung ne-Google iminyaka emithathu, kokubili kusuka uma ifoni wadedelwa – hhayi uma uyithenga.
Impilo yebhethri kuyahlukahluka kakhulu phakathi amadivayisi, futhi “yosuku lonke ibhethri” ngokuvamile akusho 24 amahora emkhatsini amacala. Abanye bangase bangaboni ukuthi isikhathi eside ngokwanele, ikakhulukazi uma usuphelelwe kusihlwa.
Impilo yebhethri Ubangwa njengoba ubudala ibhethri kakhulu, ngakho ibhethri izinsuku ezimbili-cishe uqinisekise ifoni ihlala okungenani ngosuku ngemva kweminyaka emibili.
Amakhamera kukhona inkundla zamanje phakathi abadlali ezinkulu, kodwa eziseceleni phakathi babo neminye.
Abaningi basebenzisa izithombe yezamakhompyutha ehlanganisa hardware ne-algorithm isofthiwe eziphambili, ngokuvamile ngokuvumela amakhamera amaningi ukuhlanganisa ukwenza isithombe esisodwa.
Njengoba isofthiwe ezifana ikhamera kwenza umehluko kakhulu ngendlela ihadiwe, futhi ingenye yezindawo ezimbalwa empeleni kuthuthukisa ngokuhamba kwesikhathi ngezibuyekezo.
izinhlelo Multi-ikhamera ngokuvamile ukunikeza, ezifana zooms ewusizo, portrait izindlela futhi kangcono ephansi ukukhanya ukusebenza, kepha konke okudalwe ngokulinganayo. Kukhona futhi amakhamera 3D, elikwazi ukuzwa isimo sobuso nezinye amaqhinga fun.
Isibalo megapixels (MP) futhi kwenza umehluko. Ukuba MP ngaphezulu akubalwa zilingane umfanekiso ongcono, kodwa yesimanje smartphone amakhamera sihlanganise Amaphikseli amaningi ukuthuthukisa ikhwalithi yesithombe esikhiqiza 12MP isibhamu ezivela 48MP izinzwa, ngokwesibonelo.
Okunye okumele azibheke
ukushaja okungenantambo: elula, kodwa kancane kuka nge ikhebuli ngokuvamile iphedi ukushaja akezi ebhokisini
Ukuvikeleka: ngokuvamile ingilazi phezu nangemuva of ifoni kwenza kube ukuthi siphuka kalula
resale Inani: iPhones ubambe value abo kunabanye kakhulu
OLED kuqhathaniswa LCD: izikrini OLED ihlaba umkhosi ukukhanya yabo ngakho kufanele abamnyama ijule ngokungaphezulu futhi imibala ukhombise impilo more, ngenkathi LCD izikrini ishibhile
Lawa namanje amafoni ezinhle kuwufanele ukuthenga uma kungekho Smartphones amane phezulu silingane bill.
RRP: £ 749 / $749
Apple kancane eshibhile iPhone XR inikeza iningi izici iPhone XS. It has impilo yebhethri kangcono kakhulu, kodwa inekhamela sibi, a inkudlwana, kodwa esibukweni sibi futhi wenziwe aluminium namabhodlela, esikhundleni insimbi engagqwali, ukulahlekelwa nokuzwakala kokunethezeka nokwazi ukuthi kungcono okungcono Apple ungenza.
IPhone XR ubukeka emangalisa abomvu, kodwa akusiwona ezishibhile yinoma yimuphi elula umcabango, kubiza kakhulu noma ngaphezulu njengoba kuyiqiniso iwuhlelo amafoni encintisana. IPhone XS namanje umuntu ukuthenga uma ufuna i-iPhone, kodwa uma ufuna imali, ukushintshela ku-Android.
isibuyekezo esigcwele: iPhone XR ukubuyekeza: inkosi ibhethri eshibhile Apple
RRP: £ 1.099 / $1,099
Uma kumele ube i-iPhone futhi kumelwe abe screen omkhulu, ke iPhone XS UMax inketho yakho kuphela. Kepha libiza emakhulu sinda nakakhulu, okwenza kube kuhle kunzima ukusingatha kwansuku usuku, okusho ukuthi ezincane iPhone XS iyona engcono.
isibuyekezo esigcwele: iPhone XS Max ukubuyekeza: Apple smartphone supersized
RRP: £ 899 / $999
Le nguqulo elikhulu Galaxy S10 nge isibonisi 6.4in QHD + has esikrinini esingcono kakhulu atholakala kunoma iyiphi idivayisi. I okweqanda imbobo-Punch notch kuyinto inoveli, equkethe ezimbili ezinhle selfie amakhamera. I kathathu ikhamera yangemuva muhle, kodwa hhayi isichibi on the Huawei P30 Pro. Ukusebenza kuhle, unjalo isofthiwe, kodwa ukuphila kwebhetri kancane esidumazayo kuqhathaniswa ngezisusa.
isibuyekezo esigcwele: Samsung Galaxy S10 + ukubuyekeza: isikrini umane emangalisa
Price: £ 899 / $899
Samsung sika Galaxy Note 9 linikeza okuthile ihlukile, nge nempilo yebhethri ende, isikrini omkhulu futhi obaluleke kunayo yonke, S Pen lokuloba. Uma ufuna Umthombo umkhiqizo, Qaphela 9 ingabe. Kodwa-ke futhi omkhulu nge umklamo kancane sangomhla.
isibuyekezo esigcwele: Samsung Galaxy Note 9 ukubuyekeza: ifoni do-konke
RRP: £ 899,99
Umngane Womshado 20 Pro has big, ezikhangayo 6.39in QHD isihenqo +, umzimba svelte, impilo yebhethri ende kanye nokusebenza kakhulu ukuthi wakwenza ifoni phezulu 2018. Nokho, kakhulu ohlelweni ikhamera kathathu yayo nge zoom 3x optical iye ukudlulwa ngu entsha ye P30 Pro Huawei sika, okuyinto has a Leica isikwele ikhamera zoom 5x optical. Kuwufanele nibheke amadili, ikakhulukazi uma ufuna 3D ubuso yokuvula inketho.
isibuyekezo esigcwele: Huawei Mate 20 Pro ukubuyekeza: cutting edge Ukukhalipha
RRP: £ 500
Huawei sika Ukuhlonishwa brand wenze igama ngokwayo usike-intengo kodwa okuhle amafoni. I View20 ifoni engcono kunazo zonke ezake wenza futhi ngokuhlaziya Inani nje £ 500.
It has a top-of-the-line Huawei Kirin 980 amagama (njengoba kubonakala Mate 20 Pro), 6.4in isikrini Muhle FHD + LCD, esiningi, 6 noma 8GB RAM, super-okusheshayo zeminwe Enani ngemuva futhi ngisho usenayo isokhethi embobeni. izici Standout Uyi notch imbobo-Punch esikrinini, lapho indawo enhle kakhulu 25MP selfie pokes ikhamera, esikhulu ngempela 48MP ikhamera ngemuva.
Fast ukushaja, impilo yebhethri ende, elikhulu e-isandla nokuzwakala kanye zasendle iphethini ukukhanya-obonisa V emise engilazini emuva round out avelele. Ukuhlonishwa sika Magic-UI 2, okusekelwe Android 9 Pie, kuyinto akamuhle njengoba OxygenOS OnePlus sika, kodwa okungenani uthola eminyakeni emibili kuya kwemithathu izimvuselelo.
Out of the ezimbili £ 500-ekupheleni amafoni, ukuthenga Nodumo View20 uma ufuna ikhamera yezinga eliphezulu engcono; ukuthenga OnePlus 6T uma ufuna ngomuzwa ongcono kanye ne-software.
isibuyekezo esigcwele: Ukuhlonishwa View20 ukubuyekeza: ifoni phezulu lapho kugamanxa izindleko i-iPhone XS
RRP: £ 739 / $799
I-Pixel 3 imayelana ikhamera ye-Google kanye ne-software. Isikrini 5.5in OLED incane ngezindinganiso 2019 futhi has bezels enkulu phezulu futhi phansi, ezivuma ifoni ezinkulu kunalokho kufanele ibe kanye sinike ukubuka yango.
Kodwa ikhamera yangemuva ye-Google kumnandi olulodwa, isofthiwe futhi fast updates kakhulu nibaluleke bathenga. Ukusebenza kuhle kodwa ukuphila kwebhetri kancane ababuthakathaka. Thenga uma ufuna ifoni ezincane kanye Samsung Galaxy S10 Akusikho okwenu.
isibuyekezo esigcwele: -Pixel-Google 3 ukubuyekeza: nokuvusa Ibha isipiliyoni Android
-Pixel-Google 3 XL
RRP: £ 869 / $899
I emikhulu-Pixel-Google 3 XL has yonke into eyenza i-Pixel 3 ifoni elikhulu ngempela, kodwa likhulu nge notch omkhulu phezulu kwesikrini. Kunzima kakhulu ukusingatha kuka ingane yakini yayo ezincane futhi kuyabiza, kodwa ukuphila kwebhetri kancane kangcono. Uma uthanda i-Pixel 3 kodwa ufuna Isikrini esikhudlwana, salokhu ukuba ifoni ngawe, kodwa lonke inguqulo encane yidivayisi kangcono abantu abaningi. Umngane Womshado 20 Pro iselula kangcono big-screen wonke.
isibuyekezo esigcwele: -Pixel-Google 3 XL ukubuyekeza: big namanje amahle
RRP: £ 499
isinciphisi ifoni Xiaomi kuqala aligcini kakhulu imali, nge top-indiza specs for 2018 ukuncintisana ngokuqondile OnePlus 6T Nodumo View20. Kuthatha indlela ehlukile lenkinga lapho ukubeka ikhamera selfie i design-zonke esibukweni, ekufihleni ngemva isikrini kwesigaba slide ukuphuma.
Okuhle, kodwa ngempela omkhulu njengoNkulunkulu umncintiswano walo, le foni omkhulu Kunenkolelo emuva ngumuntu isisindo esindayo futhi nakho isofthiwe nje singekho ezinhle, naphezu okuqinile ongakhetha isenzo navigation.
isibuyekezo esigcwele: Xiaomi Mi Mix 3 ukubuyekeza: inoveli isinciphisi ekugcineni hits UK
Nokia 8 Sirocco - isofthiwe Okuhle kodwa design isilinganiso nekhamera - £ 600
Razer Ucingo 2 – Gaming isilo ifoni ewela phansi ukusebenza ikhamera - £ 500
Sony Xperia XZ3 - Good, kodwa hhayi ifoni enkulu ukuthi igeja uphawu - £ 699
LG G7 - design uninspiring nesofthiwe lokho akuyona kwafana izimbangi - £ 375
Kuhle ezindlebeni engenantambo kweqiniso: AirPods, Samsung, Jabra futhi Anker kuqhathaniswa futhi bathi kungcono
Kushicilelwe nge Guardian News Feed plugin for WordPress.
← Izici aqaphelekayo Ukusebenzisa Inqubo EaseUS Data Recovery Iseluleki Mahhala Ukuhlonishwa 20 Pro ukubuyekeza →